महाभारत खण्ड ५ - विकिपुस्तक
महाभारत खण्ड ५
धृतराष्ट्र, पाण्डु तथा विदुर को जन्म को कथा[सम्पादन]
सत्यवती को चित्रांगद र विचित्रवीर्य नामक दुइ पुत्र हुये। शान्तनु को स्वर्गवास चित्रांगद र विचित्रवीर्य को बाल्यकाल मा नै भएको थियो यसैले उनको पालन पोषण भीष्म ले गर्यो। भीष्म ले चित्रांगद को ठूलो भए पछि उनलाई राजगद्दी मा बिठा दिए तर केहि नै काल मा गन्धर्वों देखि युद्ध करते हुये चित्रांगद मारा गया। यस मा भीष्म ले उनको अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिए। अब भीष्म को विचित्रवीर्य को विवाह को चिन्ता भए। उन्हीं दिनहरु काशीराज को तीन कन्याओं, अम्बा, अम्बिका र अम्बालिका को स्वयंवर होने वाला थियो। उनको स्वयंवर मा गएर एक्लै नै भीष्म ले वहाँ आये समस्त राजाहरु को परास्त गर्‍यो र तिनै कन्याओं को हरण गरेर को हस्तिनापुर ले आये। ठूलो कन्या अम्बा ले भीष्म को भने कि त्यो आफ्नो तन-मन राजा शाल्व को अर्पित गरेर चुकी छ। उनको कुरा सुन गरेर भीष्म ले उसलाई राजा शाल्व को नजिकै भिजवा दिए र अम्बिका र अम्बालिका को विवाह विचित्रवीर्य संग करवा दिए।
राजा शाल्व ले अम्बा को ग्रहण गरेन अतः त्यो हस्तिनापुर लौट गरेर आ गई र भीष्म देखि बोली, “हे आर्य! तपाईं मलाई हरेक गरेर लाये हो अतएव तपाईं म संग/भन्दा विवाह गर्नुहोस।” किन्तु भीष्म ले आफ्नो प्रतिज्ञा को कारण उनको अनुरोध को स्वीकार हैन गर्यो। अम्बा रुष्ट हो गरेर परशुराम को नजिकै गई र उन लेआफ्नो व्यथा सुना गरेर सहायता माँगी। परशुराम ले अम्बा देखि कहा, “हे देवि! तपाईं चिन्ता न गर्नुहोस, म तपाईंको विवाह भीष्म संग करवाउँगा।” परशुराम ले भीष्म को बुलावा पठायो किन्तु भीष्म उनको नजिकै हैन गये। यस मा क्रोधित भएर परशुराम भीष्म को नजिकै पहुँचे अझ दुइनों वीरहरुमा भयानक युद्ध छिड गया। दुवै नै अभूतपूर्व योद्धा थिए यसैले हार-जीत को फैसला हैन हो सका। आखिर देवताहरु ले हस्तक्षेप गरेर को यस युद्ध को बन्द करवा दिए। अम्बा निराश हो गरेर वन मा तपस्या गर्न चली गई।
विचित्रवीर्य आफ्नो दुवै रानियों संग भोग विलास मा रत हो गये किन्तु दुवै नै रानियों देखि उनको कुनै सन्तान भएन र उनि क्षय रोग ले पीडित हो गरेर मृत्यु को प्राप्त हो गये। अब कुल नाश भएको भय देखि माता सत्यवती ले एक दिन भीष्म देखि कहा, “पुत्र! यस वंश को नष्ट हुन बाट बचान को लागि मेरी आज्ञा छ कि तिमी यिनी दुवै रानियों देखि पुत्र उत्पन्न करो।” माता को कुरा सुन गरेर भीष्म ले कहा, “माता! म आफ्नो प्रतिज्ञा कुनै पनि स्थिति मा भंग हैन गरेर सकता।”
यो सुन गरेर माता सत्यवती को अत्यन्त दुःख भयो। अचानक उनलाई आफ्नो पुत्र वेदव्यास को स्मरण हो आयो। स्मरण गर्ने बित्तिकै वेदव्यास वहाँ उपस्थित हो गये। सत्यवती उनलाई देख गरेर बोलीं, “हे पुत्र! तिम्रो सबै भाइ निःसन्तान नै स्वर्गवासी हो गये। अतः मेरो वंश को नाश हुन बाट बचान को लागि म तिमीलाई आज्ञा देती हूँ कि तिमी उनको पत्निहरु संग सन्तान उत्पन्न करो।” वेदव्यास उनको आज्ञा मानएर बोले, “माता! तपाईं उन दुवै रानियों देखि कह दीजिये कि उनि एक वर्ष सम्म नियम-व्रत को पालन गरि रह्नुहोस तब उनको गर्भ धारण हुनेछ।” एक वर्ष व्यतीत भए पछि वेदव्यास सबै भन्दा पहिले ठूलो रानी अम्बिका को नजिकै गये। अम्बिका ले उनको छिटो देखि डर गरेर आफ्नो आँखा बन्द गरेर लिये। वेदव्यास लौट गरेर माता देखि बोले, “माता अम्बिका को ठूलो तेजस्वी पुत्र हुनेछ किन्तु आँखा बन्द गर्न को दोष को कारण त्यो अंधा हुनेछ।” सत्यवती को यो सुन गरेर अत्यन्त दुःख भयो र उन्हों ले वेदव्यास को सानो रानी अम्बालिका को नजिकै पठायो। अम्बालिका वेदव्यास को देख गरेर भय भन्दा पहेंलो पड गई। उनको कक्ष देखि फर्कनु मा वेदव्यास ले सत्यवती देखि कहा, “माता! अम्बालिका को गर्भ देखि पाण्डु रोग ले ग्रसित पुत्र हुनेछ।” यसले माता सत्यवती को र पनि दुःख भयो र उनले ठूलो रानी अम्बालिका को पुनः वेदव्यास को नजिकै जाने को आदेश दिए। यस पल्ट ठूलो रानी ले स्वयं न जा गरेर आफ्नो दासी को वेदव्यास को नजिकै भेज दिए। दासी ले आनन्दपूर्वक वेदव्यास देखि भोग गराए। यस पल्ट वेदव्यास ले माता सत्यवती को नजिकै आ गरेर कहा, “माते! यस दासी को गर्भ देखि वेद-वेदान्त मा पारंगत अत्यन्त नीतिवान पुत्र उत्पन्न हुनेछ।” यति भन्एर वेदव्यास तपस्या गर्न चले गये।
समय आए पछि अम्बिका को गर्भ देखि जन्मांध धृतराष्ट्र, अम्बालिका को गर्भ देखि पाण्डु रोग ले ग्रसित पाण्डु तथा दासी को गर्भ देखि धर्मात्मा विदुर को जन्म भयो।
"https://ne.wikibooks.org/w/index.php?title=महाभारत_खण्ड_५&oldid=4349" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १८:५५, २९ सेप्टेम्बर २०११ मा परिवर्तन गरिएको थियो।